Indawo yabucala ngaphandle nje kwe-I-90; ukufikelela kwisitulo esinamavili - I-Airbnb
Indawo yabucala ngaphandle nje kwe-I-90; ukufikelela kwisitulo esinamavili
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguJulie
Ifanelekile kwabo bahamba nge-I-90 kumantla mpuma e-Ohio, ikhaya lethu lelizwe limi kanye kuhola wendlela. Yiza uhlale kwigumbi lethu elitsha elihlaziyiweyo elifikelelekayo ngokupheleleyo kwisitulo esinamavili, kuquka negumbi lokuhlambela labucala. Iqashiso lethu linemithi kwaye lizolile, kwaye izinto eziluncedo ezikufutshane ziquka isikhululo serhasi esinendawo yokutyela engaphantsi komhlaba, indawo esemgangathweni yepizza yendawo, kunye neendlela ezinkulu zokuhamba intaba. Ukufikelela kuhola wendlela olula kuthetha ukuba iindwendwe zinokuhamba ngokulula kwiindawo zokutyela, ilizwe lewayini, kunye nobomi besixeko eCleveland.
Ikhaya lethu libekwe kude endleleni kwaye kukho indawo yokupaka eninzi ekhoyo. Ifikeleleka ngezinyuko okanye kwirempu, indawo yeendwendwe inomnyango wayo. I-suite isanda kupeyintwa kwaye icocekile ngokukhanya kwendalo okuninzi. Indawo ibandakanya ibhedi yendlovukazi, ibhedi okanye ibhedi ephindwe kabini, itafile kunye nezitulo, kunye negumbi lokuhlambela elibanzi elinomnyango obanzi kunye nenqanaba lokuhlambela. Ubungakanani obugcweleyo bokutsala ibhedi inegwebu lememori kunye ne-topper ekhutshiweyo yokuthuthuzela. Sinika umenzi wekofu enye, ikofu, icreamer, iswekile, iibhegi zeti, ibhotile yamanzi, ibha yegranola kunye neapile kwindwendwe nganye. Iindwendwe zamkelekile ukusebenzisa imidlalo kwikhabhinethi.
Sikufutshane kakhulu kuhola wendlela kunye nesikhululo segesi seBP esinevenkile eluncedo kunye nevenkile yokutyela engaphantsi komhlaba. Malunga neekhilomitha kumzantsi wendlu yethu eVrooman Road, kukho esinye isikhululo segesi kunye nevenkile yokutyela yepizza enemenyu epheleleyo kunye nesidlo sangaphandle. Kukwakho iindlela zokuhamba intaba kunye neendlela zebhayisekile ezigangathiweyo kufutshane.
Siyafumaneka ukuba siphendule imibuzo ngokobuqu okanye ngetekisi okanye ngomnxeba. Sinobuhlobo kwaye singakonwabela ukuva malunga nohambo lwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Painesville